Ahoana ny fomba hampidirana SWF ao amin'ny HTML amin'ny tranonkala
Te hampiditra ny SWF misy anao ao amin'ny tranonkalanao ve ianao? Raha toa ka manana safidy havoaka amin'ny format HTML ny Shockwave Flash, dia misy pejy tsy misy fotony misy ny rakitra SWF misy azy. Tsy dia manintona loatra ny mpihaino anao raha mampiasa ny layout manokana ianao ary te hampiditra ny sarimihetsika Flash ao anatin'io famelabelarana io mba hanatsarana ny tranonkalanao. Fantaro ny fomba fametrahana rakitra SWF amin'ny alàlan'ny editor WYSIWYG na mpamoaka lahatsoratra.
Mampiasa ny WYSIWYG Editor mba hampidirana SWF
Raha fantatrao amin'ny WYSIWYG (Ny zavatra hitanao dia azonao), tahaka ny Macromedia Dreamweaver na Microsoft FrontPage, dia mora amin'ny fampiasana ny sariohatra enti-mampiditra fotsiny ny Flash Flash, ary misafidy ny SWF misy anao eo amin'ny toerana misy anao hard drive; Ny mpanoratra amin'ny HTML dia hanoratra ilay code ho anao, ary ny zavatra rehetra tokony hataonao dia manitsy ny làlan'ny rakitra hanehoana ny toerana ao amin'ny tranonkalanao.
Ampiasao ny tonian-dahatsoratra lahatsoratra hampidirana SWF ao amin'ny Code HTML
Raha toa anefa ka miasa amin'ny tonian'ny lahatsoratra ianao ary manoratra ny code HTML anao amin'ny scratch dia mety ho somary sarotra kely ihany izany. Ity misy rakitra haingana sy mora, nefa:
Amboary ny solosaina Publice ho Flash SWFs sy HTML hanehoana ny fomba tianao hiposahan'ny Flash SWF ao amin'ny tranonkalanao.
Ampidiro ny sarimihetsika Flash as HTML.
Karohy ny rakitra HTML ao amin'ny ordinateranao, tsindrio havanana, ary mifidiana "Misokatra amin'ny".
Safidio ny NotePad na ny mpamoaka lahatsoratra hafa.
Alefaso ny code de source avy amin'ny tahiry HTML.
Apetraho ao amin'ny pejin-tranonkala ny loharano ao amin'ny toerana tianao hizaranao ny rakitra SWF.
Amboary ny lalan-drakitra ahafahana maneho ny toerana misy ny rakitra SWF ao amin'ny tranonkalanao, ary alefaso ny tahirin-kafatra HTML sy SWF anao any amin'ny mpampiasa azy. ( Fanamarihana: mihatra koa izany raha mampiasa PHP, JSP, ASP, CGI, na tranonkala hafa ianao.)
Ohatra ny Code HTML nampidirina ho an'ny SWF
Tokony hijery toy izao ny kaodikinao:
Famoahana ny code HTML SWF
Ny ankamaroan 'izany dia tsy voatery hikasika, koa aza manahy ny fahatsapana izany. Ny fizarana sora-baventy dia mametraka ny codebase amin'ny fampiasan'ny Flash ampiasaina, mba hanamarinana raha toa ka manana an'io version io ny mpampiasa anao. Ny sisa dia manana marika mba haka ilay mpilalao Flash (raha tsy manana azy ny mpampiasa) sy ireo fepetra tokony hapetainao , indrindra indrindra ny tsipika misy ny EMBED src = "Yourfilename.swf" .
Amin'ny alàlan'ny default, ny anaran-drakitra dia ho any, satria Flash dia mamoaka ny SWF sy ny dossier HTML ao amin'io ordinatera io miaraka amin'ny rakitra FLA. Na izany aza dia azonao atao ny mametraka ny SWF misy anao ao anaty sehatr'asa iray eo amin'ny servero, angamba fichier iray misy soratra hoe "flash", izay mety hanova ny codeo hamaky ny EMBED src = "flash / yourfilename.swf" .
Mora kokoa noho ny mihaino izany. Omeo fiezahana hamantatra ny tenanao izy.
Hevitra misongadina eo anelanelan'ny AutoCAD sy Programa hafa 3D
Ny karaman'ny mpankafy iray dia afaka manantena
Inona no tsara kokoa: Flash na Animated GIFs?
Fampihetsehan-tsary momba ny sarimihetsika Animation Character / Character Breakdown
Inona avy ireo sary mihetsika?
Manaova sary an-tsary amin'ny AnimDessin2
Ny fomba fampiasana fanazavana rehefa misy fiantraikany
Ny fototry ny fanentanana fanatanjahantena
Mametaka ny Fehezandalàna momba ny asa
Ahoana ny fametrahana Skype amin'ny Android
Jereo ny Free Education Movies Online: Ireo Top 20 Sites
7 Fahagagana momba ny Wii U
Ahoana no hametrahako mpitandro filaminana ho an'ny trano fanatontosako trano?
Ampio ny Widget ho an'ny profil amin'ny tagged
Inona ny rakitra OXT?
Ahoana ny famerenana ny antontan-taratasy ao amin'ny Taskbar sy Declutter A Desktop
Ahoana ny fomba hanatonana Hotmail amin'ny Windows Live ho an'ny Gmail
Lesona amin'ny RSS
Alefaso hafatra maimaimpoana amin'ny alalan'ireo Apps 4 ireo
Ahoana ny fametrahana Apple AirPort Express
Alohan'ny hividiananao PANTONE Colour Guides
Ahoana no fomba hamahana ny Hook.dll tsy hita na diso diso
Ny zava-drehetra tokony ho fantatra momba ny iPod Shuffle Modèle
Review: Bean Word Processor for Mac
Tantaran'ny Wolfenstein- Castle Wolfenstein sy Beyond
Firy ny tranokala? Firy ny habaka aty?
Yurbuds dia tsara fitondran-tena
Understanding the CSS Clear Property